२४ प्रतिशत नेपालीले खान्छन् उच्च रक्तचापको औषधि, गण्डकी प्रदेशमा धेरै – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Health/२४ प्रतिशत नेपालीले खान्छन् उच्च रक्तचापको औषधि, गण्डकी प्रदेशमा धेरै
काठमाडौं– नेपालमा २४ दशमलव ५ प्रतिशत नेपालालीमा उच्च रक्तचापको समस्या पाइएको छ ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको सर्वेक्षणले २४ दशमलव ५ प्रतिशत नेपालीमा उच्च रक्तचापको समस्या रहेको र उनीहरुले रक्तचाप नियन्त्रणका लागि औषधि सेवन गरिरहेको पाइएको छ ।
परिषद्ले हालै सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानको तथ्यांकका अनुसार उच्च रक्तचापको समस्या भएर औषधि खाइरहेकामा महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी देखिएको छ । २९ दशमलव ८ प्रतिशत पुरुष र १९ दशमलव ७ प्रतिशत महिलामा उच्च रक्तचापको औषधि खाइरहेका छन् ।
उच्च रक्तचापको समस्यामा सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । गण्डकी प्रदेशमा २९ दशमलव ९ प्रतिशतमा उच्च रक्तचापका बिरामीहरु छन् । यस्तै सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ प्रतिशतमा उच्च रक्तचापको समस्या रहेको छ ।
कुन प्रदेशमा कति प्रतिशत विरामी ?
गण्डकी प्रदेशः २९ दशमलव ९ प्रतिशत
प्रदेश ५: २८ दशमलव २ प्रतिशत
प्रदेश ३: २५ दशमलव २ प्रतिशत
प्रदेश १ः २६ दशमलव ६ प्रतिशत
कर्णाली प्रदेशः २१ दशमलव ४ प्रतिशत
सुदूरपश्चिम प्रदेश : २१ प्रतिशत
प्रदेश २ः १८ दशमलव ७ प्रतिशत ।
परिषद्ले यो अध्ययन फेब्रुअरी देखि मे सम्ममा गरेको हो । परिषद्ले नसर्ने रोगको जोखिम तत्वको रुपमा चिनिने उच्च रक्तचापको तथ्यांक निकाल्न ७ वटै प्रदेशका ५ हजार ५ सय ९३ जनामा स्टेप सर्वेक्षण गरेको थियो ।
परिषद्ले सर्वेक्षणमा सहभागि भएकाहरुको उच्च रक्तचापको अवस्था पत्ता लगाउन उचाइ, तौल र रक्तचापको मापन गरेको थियो । परिषद्ले गरेको अनुसन्धानमा एसबिपि १ सय ४० भन्दा माथि भएको र डिविपि ९० भन्दा माथि भएको अवस्थामा उच्च रक्तचाप भएको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय खानपान र जीवनशैलीका कारण मानिसहरुमा उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दै गएको छ । उच्च रक्तचापलाई समयमै नियन्त्रण नगर्दा उच्च रक्तचापका बिरामीलाई मुटुरोग, मिर्गौला सम्बन्धी रोग र पक्षघात हुने सम्भावना उच्च रहन्छ ।
–अधिकांश उच्च रक्तचापको बिरामीलाई लक्षण नदेखिने पनि हुनसक्छ,
–उच्च रक्तचाप बढ्दै गएमा टाउको दुख्छ,
–नाकबाट रगत बग्ने,
– रिगाँटा लाग्ने ।
रक्तचाप नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
–सन्तुलित आहारमा बढी जोड दिने,
– आफ्नो स्वस्थ तौललाई कायम राख्ने,
–खानामा नुनको प्रयोग कम गर्ने,
–फलफूल, सागसब्जी र दूधबाट उत्पादिन चिल्लो कम भएका खाद्यन्न प्रयोग गर्ने,
–नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने,
– सम्भव भएसम्म सातामा एकदिन पौडी खेल्ने ।